Iinkqubo ezi-5 eziPhambili zokuRhweba nge-Forex ngoJanuwari 2022 - Funda iziPhononongo ezi-2 zoRhwebo
Ezona nkqubo ziBalaseleyo zoRhwebo lwe-Forex ngo-2021 no-2022!
The Eyona misebenzi mihle yokurhweba ngaphambili kunye nemeko yokuthenga nokuthengisa ii-asethi itshintshe kakhulu ukusukela oko yangena kwindawo ye-intanethi. Kude kube lelo xesha, ukusetwa kwemveli yorhwebo kufuna ukuba ubize umthengisi wakho ukuba afake izikhundla egameni lakho. Inkqubela phambili yetekhnoloji ukusukela oko yenze ukuba kube lula ngaphaya kwentelekelelo ukwenza ukhetho lwakho lokurhweba ngocofa nje okumbalwa.
Namhlanje, icandelo lotyalo-mali lithathe inyathelo elinye ukuya phambili ngokusungulwa kwee -apps zorhwebo. Ezona zixhobo zibalaseleyo zokurhweba zikuvumela ukuba uqokelele ulwazi ngokubhekisele kwiiasethi zakho, ulandele indlela ezihamba ngayo, ubeke iiodolo zakho, kwaye uzilawule- nokuba uphi.
Nokuba yeyiphi i-niche ojolise kuyo, nokuba kukwizitokhwe, ii-indices, i-forex, izinto zorhwebo, okanye ii-cryptocurrensets- ungafumana usetyenziso olusebenza kuyo yonke imimandla okanye olunezinto ezizodwa zesixhobo esithile semali. I-intanethi inezinto ezininzi onokukhetha kuzo, ezilungele umdla wabucala kunye nobungcali babathengisi bawo onke amanqanaba.
Ngoku, umbuzo obalulekileyo ngowokuba yeyiphi inkqubo ye-forex yokurhweba efanelekileyo kuwe? Kwesi sikhokelo, sijolise ekufumaneni!
Ngamakhulu amawaka ezicelo ezinikezelweyo zeselfowuni ezikhoyo ngoku zokukhuphela kunye nokufaka ngonqakrazo lweqhosha-iyavakala into yokuba oko sele kwandisiwe kwinqanaba lotyalo-mali. Ii -apps zokurhweba zililo kanye eli gama libonisa. Ziyakwenza ukuba wenze ukhetho lotyalo-mali kwaye uzenze ngesixhobo esiphathwayo.
Kule mihla, uya kufumana phantse zonke izixhobo zokurhweba kunye nenqaku kwi-app yokurhweba onokuyifumana kwiwebhusayithi yedesktop. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba ayenzelwanga ukuba zisebenze njengezixhobo ezizimeleyo. Ngokuchasene noko, kukho imiba ethile, njengabatyali mali, oya kuyidinga ukufikelela kwinkonzo yomrhwebi epheleleyo.
Ngaphaya koko, yeyiphi imisebenzi onokuyenza ngenkqubo yokurhweba eya kuxhomekeka kwindawo yokuthengisa, imigaqo-nkqubo, kunye nemigaqo neemeko zabo. Umzekelo, masithi uthengisa ngeqonga lokurhweba kwi-Intanethi. Ubuye usebenzise iapps yabo yokurhweba ukuze ubenzele lula. Oku kukunika isibonelelo sokufikelela kukhetho lokuthengisa ngokusebenzisa iapp. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwenza uhlalutyo olupheleleyo lobuchwephesha bokusebenza kweasethi, kungangcono ukuba ukwenze oku kwindawo ephambili yedesktop.
Ii -apps zokurhweba ziluncedo ngakumbi ukuba awunakho ukufikelela kwidesktop ngamaxesha onke, njengoko ziyilelwe ukukunceda ukuba uhambe ngokulula kwinani elikhulu lomthengisi weeasethi ezithengiswayo. Nangona uya kuba nakho ukufikelela kwindawo yokuthengisa ngokusebenzisa i-smartphone yakho, ubungakanani bescreen esincinci kunokwenza ukuba kube nzima ukwenza uphando olucokisekileyo kunye nohlalutyo.
IiNkqubo zoRhwebo zibalulekile
Kuzo zonke izixhobo zemali ezikhoyo zokurhweba, i-forex ithathwa njengenye yeemarike zolwelo kwihlabathi. Ukunyanzeleka, ukuba yenye yeendlela ezithandekayo ezilawula iimarike zotyalo-mali, ikhetha kakhulu i-forex.
Unokulindela ukubona intshukumo eqhubekayo kwimarike kuzo zonke iiperi ezinkulu zemali ngalo naluphi na usuku. Ezi asethi zisengozini enkulu kwiminyhadala, kunye nezinye iindaba zoqoqosho- njengoko abarhwebi behlala befuna iimarike ezitshintsha ngokukhawuleza. Kananjalo, i-forex ikhethwa kakhulu ngabo bafuna ukuthenga ngokubonakalayo kunye nezixhobo zemali.
Ngenxa yoku kungazinzi okuphezulu, abathengisi be-forex kufuneka bahlale bejonga utshintsho kwiimarike. Bafuna ukufikelela kwiitshathi, iikowuti, kwaye ngaphezulu kwako konke, iiakhawunti zabo zokurhweba ngonqakrazo lweqhosha. Ngenxa yoko, ukufumana eyona app yokurhweba ye-forex kubaluleke kakhulu.
Phantse onke amaqonga orhwebo aphambili kunye nabarhwebi babonelela ngesixhobo esikhethekileyo sokurhweba. Abanye bakuvumela ukuba usebenzise usetyenziso ngaphandle kokuba uneakhawunti kwiqonga labo lokuthengisa. Oku kuyakuvumela ukuba ukhangele indawo yokurhweba kwaye ungafaki iiodolo. Oku kubandakanya ukufikelela kulwazi nakwimithombo yobugcisa enje MT4.
Usebenzisa njani iNkqubo yokuRhweba ngeMali ePhambili?
Sebenzisa usetyenziso lokuthengisa akufani kangako nokusebenzisa indawo yokurhweba kwi-intanethi. Babandakanya amanqaku afanayo kunye nenkqubo efanayo yokuseka iakhawunti yakho. Umahluko ophawulekayo kuphela oya kubakho kwi-interface kunye nendlela ohamba ngayo kwiqonga.
Apha sinesikhokelo samanyathelo ngamanyathelo ongaqala ngayo ngekhondo lakho lotyalo-mali lokuqala nge-app yokurhweba ephathekayo.
1. Fumana eyona app yokurhweba ye forex
Yonke into yokurhweba inokubonakala ngathi ineseti efanayo yeempawu. Nangona kunjalo, zonke zahlukile, zahlukile kwixabiso kunye nokusebenza kwazo. Inyathelo lakho lokuqala kukuchonga eyona nkqubo yokuthengisa ye-forex ehambelana nesimbo sakho sokurhweba.
Kumacandelo amva esi sikhokelo, sinikezele ngesishwankathelo esinzulu sendlela onokukhetha ngayo eyona nkqubo yokuthengisa ye-forex. Siza kuphinda sixoxe ngokweenkcukacha ngezinto ezinje ngommiselo, iikhomishini, iifizi kunye nokusebenza ngokubanzi.
Okona kuncinci, udinga usetyenziso oluhambelana nefowuni yakho. Ukuba utshintsha phakathi kwethebhulethi, ifowuni kunye nekhompyuter, udinga usetyenziso olunokubonelela ngamava angenamthungo kuwo onke amajelo.
2. Fakela usetyenziso lokurhweba
Ukufumana eyona nkqubo yokurhweba yeyona inzima kule nkqubo. Eminye isebenza ngokungagungqi njengokufaka nayiphi na usetyenziso lwefowuni. Uninzi lweendawo zokurhweba ziya kuba nokunxibelelana ngokuthe ngqo ekuqondisela kwiiapps zazo ezisemthethweni. Ukuba akunjalo, ungabakhangela nakwiivenkile ze-Android okanye ze-iOS.
Okwangoku, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ukhuphela uguqulelo olunelayisensi kunye noqobo lweapps. Akuqhelekanga ukuba ufumane ukulinganisa okanye iinguqulelo ezingezizo zezo ntengiso. Kuba ngokuyintloko ubeke imali yakho eyinkunzi ezandleni zenkampani yomrhwebi, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyayenza le nguqulo yokwenyani yeapp.
Nje ukuba ukhuphele kwaye ufake usetyenziso, inyathelo elilandelayo kukuvula iakhawunti yakho.
3. Misela iakhawunti yakho yorhwebo
Ukuba sele unayo iakhawunti kunye nendawo ethengisa kuyo, kuya kufuneka ungene kuphela ngeenkcukacha zakho. Ukuba akukhange kubenjalo, unokucelwa ukuba uvule iakhawunti kunye nendawo yomthengisi.
Ngaphandle kwedilesi yakho ye-imeyile kunye negama lokugqitha, amaqonga orhwebo nawo afuna ukuba ubonelele ngolwazi lomntu siqu njengegama lakho elipheleleyo, idilesi yasekhaya, umhla wokuzalwa kunye nenombolo yefowuni. Eyona nto ibaluleke kakhulu, kuya kufuneka unikezele ngenombolo yesazisi.
Kuxhomekeka kwindawo yorhwebo, abasebenzisi kuya kufuneka banikezele ngeenkcukacha malunga nenqanaba labo lomsebenzi. Ulwazi olugubungela uluhlu lomvuzo wakho wonyaka kunye nomzi mveliso wakho uya kufuneka.
Ngokubalulekileyo, iisayithi zabarhwebi nazo kufuneka zazi ngamava akho angaphambili kwishishini lotyalo-mali. Oku kunika umboneleli ngesishwankathelo sezinto zakho ozikhethileyo, kunye nenani lokuphakama olilungeleyo.
4. Qinisekisa ubungqina bakho
Inkqubo yokuqinisekisa isazisi ixhomekeke kwilizwe lakho. Umzekelo, e-UK, abathengisi kufuneka balandele inkqubo enyanzelekileyo ebizwa ngokuba Yazi umThengi wakho (i-KYC) ukuqinisekisa ubungqina kunye nokufaneleka kokungena kubudlelwane beshishini nomthengi.
Inkqubo ilula kwaye isebenza ngokufanelekileyo. Konke okulindeleke ukuba ukwenze kukubonelela ngesazisi esikhutshwe ngurhulumente esisemthethweni kwilizwe elichaziweyo kwaye ulayishe uxwebhu. Njengoko ezinye iinkonzo zokurhweba nazo kufuneka ziqinisekise idilesi yakho, unokufuna ukubonelela ngamaxwebhu ongezelelweyo anjengeerisithi zokurenta, iibhili, okanye ingxelo yebhanki.
5. Yongeza imali kwiakhawunti yakho
Ukuze wenze uninzi lwee -apps zokurhweba, kuya kufuneka ukuba ube nenkunzi efakwe kwiakhawunti yakho yorhwebo. Unokwenza oku kuphela xa iakhawunti yakho iqinisekiswe ngokupheleleyo liqonga lokurhweba (oku kuhlala kuthatha imizuzu nje). Nje ukuba ibe njalo, ungadibanisa imali ngokulula.
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokurhweba ngaphambili zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula zabasebenzisi. Oku kubandakanya ukuhlawulwa kwamakhadi etyala okanye okuthenga ngetyala, ii-e-wallets, okanye ugqithiselo ngocingo.
6. Qalisa ukurhweba kwi-app
Ngebhalansi eyaneleyo kwiakhawunti yakho, ngoku konke okushiyekileyo kuwe kukuqala ukuthenga nokuthengisa ngababini bemali. Ukusukela ukuba ii -apps zokurhweba zibonelela ngokufikelela kwiiasethi ezingaphezulu kwesinye, unokufumana ukhetho lwakho ngokusebenzisa umsebenzi wokukhangela. Ngorhwebo oluthile lwe-forex, ungangena ngababini bemali njenge-USD / EUR, kwaye uya kuthunyelwa kwelinye iphepha lokuthengisa.
Ukuba ungumqali, kuhlala kucetyiswa ukuba uqale ukurhweba kumahlelo amancinci ngaphambi kokuba uqhubele phambili kwezorhwebo. Nje ukuba uqhelane ne-app kwaye unamava ngokurhweba kwangaphambili, kuphela emva koko kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukwandisa izibonda zakho.
Uzifumana njani iiNkqubo zoRhwebo eziPhambili ze-Forex?
Impendulo yeyiphi eyona nto ilungileyo yokurhweba nge-forex iya kuxhomekeka kwiinjongo zakho zorhwebo kunye namava. Ngelixa abaqalayo banokufumana ii -apps ezichanekileyo zibonakala ngakumbi, umrhwebi onamava usenokuba ujonge ubuchule obubanika ulwazi oluphuculweyo lwentengiso.
Ukuba unengxaki yokufumana usetyenziso oluhlangabezana neemfuno zakho, nazi ezinye zeempawu ekufuneka uziqwalasele kwaye uzithelekise. Kulabo bangenalo inkululeko yexesha, siyaxoxa yethu Iinkqubo ezikhethiweyo zorhwebo lwe-forex ukuya esiphelweni seli phepha.
1. Ngaba usetyenziso luyahambelana?
Njengoko besesitshilo ngaphambili, esinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni unokufuna usetyenziso lokurhweba kungenxa yokunceda. Kananjalo, ngaphandle kokuba iyahambelana nesixhobo onaso, kuya kufuneka unamathele kuguqulelo lwewebhusayithi yakho oyikhethileyo broker.
Kwicala eliqaqambileyo, uninzi lweendawo zorhwebo ezimiselweyo ziya kuphuhlisa usetyenziso oluhambelana nezixhobo zombini ze-Android kunye ne-iOS. Nangona kunjalo, ukuba usebenzisa enye indlela yokusebenza-ungangabinayo ithamsanqa.
2. Ngaba iapp iyalawulwa?
Nawuphi na umrhwebi, i-metric yokuqala ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha indawo yorhwebo kukuthenjwa. Phambili koku yimizimba enelayisensi elawulwa ngumrhwebi. Umzekelo, amaqonga ase-UK kufuneka alawulwe yi-FCA. E-Australia, yi-ASIC, i-CySEC eCyprus, iBaFin eJamani, njalo njalo.
Ukuba usetyenziso lokuthengisa alubonakalisi ngemizimba yabo yokufumana iilayisensi, oku kufanele ukuba kube yiflegi yakho yokuqala ebomvu. Ngamanye amagama, xa uthengisa ngemali eninzi ngala maqonga, luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba imali kunye nezinto onomdla kuzo zikhuselekile. Ukuba awukwazi ukufumana olu lwazi kwi-app yokurhweba, irejista yomlawuli iya kuba nakho ukukuqinisekisa oku ngokukhangela ngokukhawuleza. Ukuba akunjalo, kungcono ukuliphepha iqonga kunye neapp yalo.
3. Yeyiphi imigaqo-nkqubo yentlawulo ekhoyo?
Iindawo zokurhweba kunye neeapps zinemigaqo-nkqubo nganye kwisixa sokuqala sedipozithi kunye nendlela onokuthi uzenze ngayo. Namhlanje, ngokungafaniyo neesayithi zedesktop, iifowuni zokusebenza zamkela iintlawulo ngeGoogle kunye neApple yokuhlawula- kufanelekile ukuba uyiqwalasele.
Abanye abasebenzisi bakhetha oku kunamakhadi etyala okanye iidipozithi zebhanki- kuba akukho mfuneko yokufaka ulwazi olunobuzaza lwezezimali kwiapp. Ngokukhetha, ezinye iisayithi zokurhweba zikwabonelela ngenkxaso ye-e-wallets ezinjengePayPal okanye iNeteller. Kuya kufuneka ujonge ukuba ngaba usetyenziso luyakuhlawulisa imali yokwenza idiphozithi.
4. Ziziphi izinto onokuzithengisa?
Usetyenziso lweentengiso alufumaneki kuphela kwi-forex kodwa nakwaso sonke esinye isixhobo sezezimali. Uya kufumanisa ukuba ii -apps zokurhweba zobudala obutsha zijongana neeklasi ezininzi zeeasethi ngokuchasene nokubambelela kwi-forex kuphela. Ungajonga iklasi nganye yeasethi kunye nokuba zeziphi iinkonzo ezinikezelwa liqonga lokurhweba ngaphambi kokwenza isigqibo.
Ukongeza, kuya kufuneka ujonge ukwahluka kweeasethi ezikhoyo kwisixhobo ngasinye semali. Umzekelo, ngelixa ezinye ii -apps zokurhweba nge-forex zibonelela ngenkxaso kuphela kwizibini ezikhulu kuphela, ezinye zikunika ukufikelela kwininzi yabantwana kunye ne-exotic.
5. Zeziphi iimali ekufuneka uzihlawule?
Amaqonga orhwebo enza imali kwiikhomishini kunye sasaza kwaye ke - icandelo elincinci lokuthenga nokuthengisa nganye liya kwiqonga elifanelekileyo. Kananjalo, iAbatyali kufuneka bajonge ii -apps zokurhweba ezinikezela ngokusasazeka okuqinileyo. Lo ngumsantsa phakathi kwexabiso lokucela kunye nexabiso lokuthengisa. Ukusasazeka kokusasazeka kukuba, kokukhona ufumana inzuzo yakho.
Amanye amaqonga okurhweba akaboneleli ngeekhomishini kodwa aye phezulu kancinci ekusasazeni. Kubalulekile ke ngoko ukuba ulinganise kwaye uthelekise amaxabiso okusasazeka kwaye nokuba ngaba abayihlawulisi na ikhomishini. Ngaphandle koku, kuya kufuneka uhlawule iifizi zokulala ngosuku ngalunye ukuze ugcine indawo ye-forex ivulekile.
6. Isebenziseka njani iapp?
Kubasebenzisi abaninzi, ujongano lweapps ludlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokwenza izigqibo. Nangona ezona zixhobo zibalaseleyo zokurhweba ngaphambili zinokuza zipakishwe ziimpawu eziphambili kunye nezixhobo, ukuba ayisebenziseki lula, kunokuba kufanelekile ukukuphepha. Endaweni yokuba uya kunyanzelwa ukuba uchithe ixesha lokufunda ukuba lusebenza njani usetyenziso- endaweni yokuchitha ixesha lakho ukuphucula iindlela zakho zotyalo-mali.
Kwangokunjalo, ukuba usetyenziso luvumela kuphela ukuba ujonge amaxabiso entengiso akhoyo-oko kuthetha ukuba kufuneka usebenzise iwebhusayithi yedesktop ukubeka urhwebo, usetyenziso alunakulunga kwiikhrayitheriya zakho. Ekugqibeleni, ukuba ujonga ujongano olusebenza kakuhle kwiscreen sefowuni yakho kwaye ikunike inguqu engenamthungo kwi-asethi iye kwi-asethi-qinisekisa ukuba usetyenziso luyasebenziseka!
7. Ithembeke kangakanani inkxaso yabathengi?
Ukuba indawo yokuthengisa ineqela elithembekileyo lenkxaso yabathengi, kuya kufuneka ulindele inqanaba elifanayo lenkonzo ngokusebenzisa usetyenziso. Phambili koku kukukwazi ukuthetha nommeli wenkxaso ngexesha lokwenyani kusetyenziswa indawo yengxoxo ebukhoma. Oku kuthintela isidingo sokubiza umthengisi phezulu.
Kutheni kufuneka usebenzise i-MT4 Trading app?
I-MetaTrader4 iguqukile ukuba ibe sesona sixhobo sibukhali kwibhokisi yabona banamava abathengisi. Nangona isebenza ngokurhweba kuzo zonke izixhobo zemali, isebenza kakuhle kakhulu nge-forex. I-MT4 ithandwa kakhulu kuba ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise ukuthanda kwabo ngokulula. Isoftware ikwavumela abasebenzisi ukuba basebenzise urhwebo lwabo ngokusekwe kwii-algorithms nakwiirobhothi ezizimeleyo. Ngale ndlela, isoftware iya kuvula ngokuzenzekelayo kwaye ivale indawo ngokokusetwa kweeparameter ozibeke kwiMT4.
Ukongeza, unokuhlalutya ukuhla kwexabiso kunye nokutolika iigrafu zorhwebo. I-MT4 sisixhobo esifanelekileyo esinokunceda ekuqhubeni zonke izicwangciso zotyalo-mali ezikude-ke le yinto ekufanele ukuba uyiqwalasele.
Iimpawu zokusebenzisa i-MT4 ye-forex yokuthengisa usetyenziso kubandakanya:
Ukufikelela kwidatha naphina
Ikuvumela ukuba ungene kwaye uphume kwangoko
Khuphela imbali yezibini zemali
Uyilo oluphendulayo lwezikrini zefowuni
Ibandakanya zonke izinto eziqaqanjisiweyo kwiinguqulelo zedesktop
Lawula imali yakho kanye kwi-app yefowuni
Izixhobo ezinje ngeetshathi kunye neegrafu ukuqonda ukuhamba kwemali
Ngokubalulekileyo, usetyenziso lweMT4 luqinisekisa ukuba inkqubo yorhwebo kunye nokwenza uhlalutyo lobuchwephesha aluthintelwanga bubungakanani bescreen esincinci.
Iindidi zeeasethi ziyafumaneka kwiApp yokuThengisa
Ii -apps zokurhweba ngefowuni zinokunxibelelana nenethiwekhi efanayo yezixhobo zemali ezikhoyo kwiindawo zokurhweba ngabarhwebi. Nangona iklasi yakho oyikhethileyo inokuba yi-forex, kufanelekile ukuba uphonononge ukuba zeziphi ezinye izixhobo zemali oza kuba nazo.
Izabelo zamasheya kunye nezabelo
Amashishini alinganayo zizabelo ezibonisa ubunini kwiinkampani ezigcinwe esidlangalaleni. Ukurhweba kwezi zabelo kuququzelelwa ngotshintshiselwano lwesitokhwe kwihlabathi liphela. Unenzuzo xa kukho uxabiso okanye ukwehla kwexabiso lezi zabelo.
I-equity ke ngoko iyathanda ukuya kwiminyhadala kunye neendaba ezinokuchaphazela imeko yenkampani esembindini. Ukuba ufuna ukutyala imali kwizabelo zamanye amazwe, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iqonga lokurhweba ngeselula likunika ukufikelela kutshintsho oluthile.
Ukuba awunawo amava afunekayo onokuqikelela kuwo ngamnye equities, emva koko enye into ebalaseleyo yeyona indices. Ezi zizitokhwe zeenkampani ezahlukeneyo ezibhaskithi njengeqela. Iqela ngalinye liya kuba neenkampani ezininzi ezahlulwe ngokudibeneyo ngokusekwe kumzi mveliso wabo.
Ngokurhweba ii-indices, ke ngokurhweba ngokurhweba kwimarike yekhaya kunakwinkampani enye uqobo. Nangona kunjalo, qaphela ukuba umahluko obonakalayo kwisabelo secandelo elinye unokuchaphazela ezinye ii-indices-ngakumbi ukuba itekhnoloji.
Iimali eziThengiswayo eziThengiswayo zithengiswa ngokufanayo kwiimpahla, kodwa ngokuqhelekileyo kwiqela leempahla ezahlukeneyo. Ixabiso le-ETFs liyatshintsha ngalo lonke usuku, kuxhomekeke kwiiasethi ezingaphantsi kwazo ezilandelelweyo. Kananjalo, kukho amathuba amaninzi okuhamba ixesha elide okanye elifutshane ngalo lonke usuku lokuthengisa. Sebenzisa usetyenziso lokuthengisa ngenxa yesi sizathu kuya kuba lukhetho oluqaphelekayo njengoko unokuqhubeka ujonge indlela iiasethi ezisebenza ngayo.
Izinto zorhwebo zahlulwe zangamacandelo amathathu - amandla, isinyithi, kunye nemveliso yezolimo. Amaxabiso ezi zinto aya kwahluka kakhulu imini yonke. Uninzi lwee -apps zokurhweba zikunika ukufikelela kuninzi lwezixhobo zorhwebo. Oku kunokubandakanya igolide, ioyile, igesi, nengqolowa.
Ukuthandwa kwee-cryptocurrensets kwibala lezorhwebo lehlabathi kuye kwavela kule minyaka imbalwa idlulileyo. Namhlanje, bobabini abaphuhlisi kunye nabatyali mali banomdla wokuyila iiapps ezilungiselela kuphela ishishini lokurhweba nge-crypto.
Ayizizo zonke iindawo zokurhweba ezingene kule ndawo okwangoku. Abarhwebi bendabuko bahlala bexhomekeke kwii-CFDs ukwenza urhwebo kwiimali zedijithali. Kananjalo, ukuba uyafuna ukungena Ukurhweba nge-cryptocurrency, Uya kuba nokufikelela kwindawo yokuthengisa kunye nokuthengisa okufutshane.
Ezona ziFakelo zokuRhweba kwi-Forex zika-2021 kunye no-2022
Ukuza kuthi ga ngoku kwesi sikhokelo singene nzulu, sigubungele ngokweenkcukacha malunga nokujonga kwi-app ye-forex. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu okwaziyo ukutyala ixesha elaneleyo lokufumana eyiyo.
Emva kokuphonononga imiba yeeasethi ezithengisekayo, iifizi, kunye neempawu-siqokelele uluhlu lwentengiso ezintlanu ezirhangqwe ngokufanelekileyo eziza kujongana nazo zonke iimfuno zakho zotyalo mali.
Ukuba ujonga indawo yokuthenga kwivenkile enye kuzo zonke iimfuno zakho zotyalo-mali, i-AVATrade iyazifanela iimfuno zakho ngeelayisensi ezilawulayo kulawulo oluninzi. Iqonga lokurhweba lelinye labarhwebi abasele bekhulile kwi-intanethi, kwaye emva koko lisebenza ukusukela ngo-2006. Indawo ikunika ukufikelela kwizixhobo zemali ezingama-250- kubandakanya indawo ye-forex egcweleyo.
I-AVATrade iyafumaneka kwidesktop, kwithebhulethi nakwizixhobo eziphathwayo, nganye inesixhobo esisebenziseka lula kunye nezinto ezintsha. Ungasebenzisa i-MT4 kunye ne-MT5, kunye ne-AVATrade ye-web-trader ekhethekileyo onokufikelela kuyo kwifowuni yakho ephathekayo. Iqonga liyagqwesa kuzo zonke iindawo, ngakumbi xa kufikwa kumava okurhweba ngokuhamba ngokukhululekileyo.
Iinkqubo zokuthengisa zivule indawo ye-forex kubaphulaphuli ngokubanzi. Inkqubo ye- kwimarike Forex isenokuba ntsha kubarhwebi abaninzi, kwaye ngenxa yezizathu ezifanayo, ubuninzi bezixhobo ezinikezelwa zeziapps zorhwebo kunokwenzeka kakhulu ukuba zikhuthaze umdla.
Ukuba u baye funda isikhokelo sethu ngokupheleleyo - kuya kufuneka ngoku ufumane ezona zixhobo zingcono zokurhweba ze-forex ezikuvumela ukuba urhwebe ekuhambeni. Ekugqibeleni, kuya kufuneka uqiniseke ukuba usetyenziso ngalunye lusebenzela iimfuno zakho, kwaye iqonga olikhethileyo linelayisensi, linikezela ngemirhumo efanelekileyo, kunye nenkxaso yabathengi enokuthenjwa.
Ndingayifaka njani imali kwintengiso yam?
Iindawo zokurhweba kunye neeapps zamkela iintlawulo ngenani lezinto onokukhetha kuzo. Phantse zonke ii -apps ezibalaseleyo ziya kuba nokukhetha ukudlulisa imali ngamakhadi ebhanki, ii-e-wallets, okanye ugqithiso ngqo lwebhanki. Ukuba usebenzisa usetyenziso lweselfowuni ukufaka, unokufumana uGoogle kunye noApple bahlawule ukudityaniswa.
Nguwuphi owona mgangatho uphezulu onokufumana kuwo ngokuthengisa ii -apps?
Imirhumo enikezelwa ziintengiso zokusebenza ziya kwahluka ukusuka komnye umrhwebi ukuya komnye. Ngokwesiqhelo, umda wokuphakama uxhomekeke kwindawo, kumava akho orhwebo, kunye nomgaqo-nkqubo weendawo zokurhweba kulawulo lomngcipheko.
Yiyiphi ibhalansi encinci ekufuneka ndiyigcine kwi-app yokurhweba?
Uninzi lweendawo zorhwebo zifuna abasebenzisi ukuba bagcine imali eseleyo kwi-akhawunti. Oku kunokuba naphi na ukusuka kwi- $ 100 okanye nangaphezulu.
Njengangoku, ii -apps zokurhweba ziphuhliswa kuphela ngezixhobo ze-Android kunye ne-iOS engqondweni.
Ndingafikelela njani kwinkonzo yabathengi kusetyenziswa usetyenziso lokurhweba?
Sele ndisebenzisa indawo yokurhweba, ndingayifumana njani iapps yabo?
Ukuba umthengisi wakho omkhethileyo sele enesoftware yokurhweba, uya kufumana ikhonkco kwiwebhusayithi ephambili yedesktop. Ukuba akunjalo, unokukhangela usetyenziso kwivenkile yeapp, kodwa qinisekisa ukuba luluhlobo olusemthethweni lwenkqubo kwaye hayi oluxelisayo.
Ngaba ndingazifumana iibhonasi ngee -apps zokurhweba ezihambayo?
Iindawo zokurhweba ngamanye amaxesha zibonisa iibhonasi zokubhalisa. Ukuba inkampani yomrhwebi inikezela ngokwenyusa okanye ngeebhonasi, usetyenziso luqinisekile ukuba lubonelele ngento efanayo.